Pokémon GO ++ 1.21.2, kinova vaovao amin'ilay hack malaza, efa misy | Vaovao IPhone
Ny kinova farany an'ny hack malaza ho an'ny famotsorana Niantic farany, Pokémon GO ++ 1.21.2 dia misy izao amin'ny kinova ho an'ny iOS ka ny mpanazatra manana iPhone dia afaka misintona sy mametraka ilay kinova vaovao. Midika izany fa ireo mpampiasa izay tia an'ity kinova novaina ity dia afaka manararaotra ireo fiasa vaovao tonga miaraka amin'ny v1.21.2 ofisialy, raha mbola manohy mampiasa ireo fiasa izay nahatonga Pokémon Go ++ ho toy ny kinova malaza. Amin'izao fotoana izao, ity kinova vaovao ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny iOS ihany.
Toy ny kinova ofisialy, ity kinova Pokémon GO ++ vaovao ity dia tsy ahitana fiasa vaovao marobe, saingy tsy afaka milaza izahay fa fanavaozana kely fotsiny satria misy zava-dehibe iray ao anatiny: fanohanana ny Apple Watch. Manomboka izao dia afaka mandeha miaraka amin'ny iPhone ao am-paosin'izy ireo ireo mpanazatra Pokémon ary, raha misy zavatra mahaliana manodidina antsika, toy ny Pokémon, dia hampandre antsika ny Apple Watch ary afaka manao ny zava-drehetra isika avy eo amin'ny tanantsika.
Pokémon GO ++ 1.21.2 dia misy fanohanana an'i Apple Watch
Anisan'ireo zavatra azontsika atao amin'ny Apple Watch sy ny lalao Niantic malaza dia ny mety tahirizo isaky ny lalao ny fampihetseham-batana, izany hoe isaky ny mivoaka sy mandeha mitady Pokémons isika dia afaka mamonjy ny fotoana nihetsiketsika ho toy ny fiofanana, zavatra izay tsy azo natao tamin'ny kinova iPhone na iPad.
Raha liana amin'ny fampiasana Pokémon Go ++ 1.21.2 ianao dia afaka ampidino ny IPA novainao avy amin'ny Ity rohy ity. Raha manana fitaovana iOS jailbroken ianao, ny fametrahana ny IPA an'ity kinova Pokémon GO novaina ity dia tsy hitovy amin'ny fametrahana IPA hafa. Raha hametraka azy tsy misy jailbreak dia mila mampiasa fomba hafa ianao, toy ny fitaovana Saurik Cydia Impactor izay ampiasainay hametrahana ny jailbreak semi-tethered ho an'ny iOS 10 avy amin'i Luca Todesco sy ilay teo aloha nataon'i Pangu, izay anananao fampianarana ao amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon GO ++ 1.21.2, kinova vaovao amin'ilay hack malaza, azo alaina ho an'ny iOS izao
Rehefa manandrana mametraka azy aho dia mahazo Error ipa.cp: 271 ary tsy mamela ahy hanohy izany.
Izaho dia nanana kinova taloha alaina (voafafa) ary miaraka amin'izay dia esoriko ny teny miafin'ny app.
Misy hevitra hanarenana azy?
Super Mario Run dia manohy manapaka ireo firaketana fampidinana